Home News Qarax markale ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Qarax labaad ayaa ka dhacay Magaalada Gaalkacyo sidda ay Risaala u xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Qaraxa ayaa ka dhacay qeybta Galmudug gaar ahaan xarunta Xerta Wadaadka Sheekh Cabdiweli.
Qaraxa labaad ayaa la sheegay in uu ka dhacay Gudaha xarunta xilli saakay Aroortii weerar iyo Qaraxyo lagu qaaday xarunta.
Qaraxyadda Gaalkacyo waxaa ka dhashay Khasaare Ballaaran oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka.
Gurmadka dadka ay waxyeelado soo gaartay ayaa hadda socota , xilli gudaha ay ka socota rasaas.
Previous articleQarax xoogaan oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Next articleCiidamada Maamulka Galmudug iyo Koox hubeysan oo dagaal xoog leh uu ku dhex marayo Magaalada Gaalkacyo
Xildhibaan: Xuseen Idow wasiir ama wasiir ku xigeen makaa dhigi karaa?
Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo Gobolka Sanaag